esi Spotify adịchaghị na-akparaghị ókè
Ọ bụ-ahụ kwuru na doro nchịkọta mgbe e eke mgbagwoju anya maka ọrụ iji jide n'aka na ndị ọrụ mgbe ikpebi na ha onwe ha na nke ngwugwu suut ha. Ọ bụ ya mere ka-ahụ kwuru na nkuzi na e dere bụ mkpa nke hour iji jide n'aka na ndị ọrụ mgbe inwe nsogbu mgbe ị na-ekpebi maka nchịkọta ozugbo ọ e arahụ site. The ụzọ na usoro na e kọwaa nke a nkuzi a ga-arụ ọrụ n'elu iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na ya pụta.
Part 1. Gịnị bụ Spotify na-akparaghị ókè?
Part 2. Olee otú iji nweta Spotify adịchaghị na-akparaghị ókè
Part 3. 5 ngwọta na-na-Spotify adịchaghị na-akparaghị ókè
Ọ bụ ụzọ kasị mma iji jide n'aka na onye ọrụ na-ege ntị na music enweghị ihe ọ bụla mgbochi nke mgbasa ozi maka price nke $4.99 kwa ọnwa nke mere na egwu na-streamed kpam kpam. Nke a na ndenye aha bụ Ozugbo kasị mma n'ire nhọrọ nke ụlọ ọrụ ma ugbu a ọ na-chịrị si. Spotify na-akparaghị ókè ọrụ ga-enwe ike ha na-eme na ndenye aha na ndị niile na ọrụ a na-agafere Spotify adịchaghị iji jide n'aka na kwuru ngwugwu-aghọ ihe kasị mma ere. Spotify adịchaghị na-na-na-kwalite iji jide n'aka na ndị ọrụ ọkọkpọhi kasị mma ma ọ bụ otu mmetụta nke na-ege ntị music na mgbe o nyere n'elu-akparaghị ókè na ndenye aha. The ndị ọrụ ugbu a chọrọ edebanye maka na-akparaghị ókè akaụntụ na-eduzi kwupụta ụbọchị 60 free ikpe oge iji jide n'aka na adịchaghị ngwugwu bụ ihe na a họọrọ na nke a.
Iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe N'ihi ọ na-gwara iji jide n'aka na ndị na-esonụ usoro a soro mere na ọ bụghị nanị na onye ọrụ na-pacified ma kwalite usoro nke ụlọ ọrụ na-enwe n'ụzọ zuru ezu enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Nzọụkwụ bụ otu dị ka maka adịchaghị debanyere na onye ọrụ nke iche mba mkpa ijide n'aka na na Keywords "Olee otú iji nweta Spotify Unlimited" na-achọgharị ihe iji jide n'aka na ha na nwoke na ngalaba na-abịa. The n'ozuzu nzọụkwụ ndị dị mfe na-eso na onye ọrụ kwesịrị iji jide n'aka na isi ihe nzọụkwụ na-kwuru dị ka ndị na-abụghị nanị na-emejuputa atumatu ma ọ bụrụ na e nwere oge ọzọ mgbe ahụ a dị mfe nzọụkwụ na-adịghị ike na-eso na niile.
The URL https://www.spotify.com/hk-en/ bụ a ga-agbaso iji jide n'aka na usoro amalite na onye ọrụ kwesịrị ka pịa Go adịchaghị button:
Onye ọrụ kwesịrị wee pịa bọtịnụ nke "Malite free ikpe" na peeji na-esonụ:
Ọ bụrụ na ndị onye ọrụ nwere a Spotify akaụntụ mgbe ahụ, ọ bụ na-ite ke n'ụzọ a akaụntụ ọhụrụ a ga-kere na nbanye nkọwa ndị na-osụk:
Ugwo nkọwa na-ahụ na-osụk na-amalite ụbọchị 60 free ikpe ma ọ bụ ndị ọzọ okwu ndị Spotify na-akparaghị ókè a bịanyere aka ruo rụchaa usoro:
Iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe adịchaghị ndenye aha ọrụ ntụgharị ochie na-akparaghị ókè ngwugwu n'efu ọ na-gwara-eso ngwọta na-edepụtara dị ka n'okpuru na-arụpụta ihe kasị mma:
A. Facebook Usoro
Usoro bụ dị ka ndị na-results ngwa ngwa:
The FB akaụntụ bụ na-banyere:
The homepage a na-ahụ na-enweta site na ịpị aha:
The ụzọ égwu> music> Spotify bụ mgbe ahụ a ga-agbaso ka ịgbakwunye Spotify ngwa nchọgharị na FB:
Nchọgharị na mgbe ahụ ka a ga-restarted iji jide n'aka na egwu na-ege ntị:
B. iOS Usoro
Na-esonụ bụ nzọụkwụ a ga-agbaso:
Site na ngwa ahịa ndị Spotify ngwa a ga-ebudatara:
The akaụntụ bụ ite ke mgbe nke a:
Onye ọrụ ahụ kwesịrị imeghe listi ọkpụkpọ iji gaba:
The listi ọkpụkpọ na-na-ebudatara iji jide n'aka na usoro-agwụ ebe a kpam kpam:
C. Android Usoro
Onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na usoro n'okpuru na-soro:
Ka anya dị ka Spotify ngwa ebudatara na arụnyere onye ọrụ kwesịrị ka ịnweta edit offline playlist nhọrọ na-amalite ọrụ n'ụzọ zuru ezu:
The playlist a ga-ebudatara bụ mgbe ahụ na-pịrị:
The offline mode n'ihi na akpan akpan playlist bụ na-ahọrọ iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na usoro-agwụ ebe a:
D. nbudata songs
Ọ dị mfe na-eso usoro ma ọ bụrụ na nzọụkwụ n'okpuru na-soro:
Onye ọrụ kwesịrị ka ibudata a ezi àgwà ọdịyo ma ọ bụ ụda edekọ n'ihu:
The Spotify audio mode na-ahụ na-ulo oru:
Usoro ihe omume ebudatara maka ndekọ bụ mgbe ahụ ka-oru:
The songs si Spotify audio ọkpụkpọ a na-ahụ na-egwuri:
Ebudatara songs na-ahụ ka a zọpụta dị ka chọrọ mezue usoro:
E. Desktọpụ usoro
Ọ bụkwa a ọkaibe Usoro na ike-soro ma ọ bụrụ na nzọụkwụ n'okpuru na-emejuputa atumatu n'ụzọ zuru ezu:
Onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na Spotify website anyị gara na ngwa ebudatara:
The Spotify akaụntụ a na-ahụ na-kwalite:
Onye ọrụ kwesịrị mgbe ibudata ngwa nke na-abịa peeji na-esonụ iji jide n'aka na usoro-agwụ na n'ụzọ zuru ezu:
Ọ bụ-ahụ kwuru na e nwere naanị otu ụzọ na-adịchaghị otu na ụzọ ndị ọzọ na e kọwara bụ ndị na ike ga-eji site ọrụ iji jide n'aka na ozugbo ikpe oge agwụ ndị free music nwere ike na-enwe na mfe na afọ ojuju na-enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. E wezụga ụzọ kọwara ná mmalite na ọ dịghị ụzọ ọzọ na-adịchaghị otu n'efu.
Comparison atọ Spotify nsụgharị
The esonụ na tebụl kasị mma na-akọwa tụnyere n'etiti nsụgharị nke usoro ihe omume ahụ e kwuru:
Metrics na nchịkọta
Play Spotify site multi-ụlọ music usoro
-Anọghị n'ịntanetị mode na kọmputa gị
Spotify Radio mode
N NA NA N NA
Spotify na-akparaghị ókè
N N NA N NA
Olee otú Listen Spotify Music on Spotify PC
Top 10 kasị mma Spotify listi ọkpụkpọ
> Resource> Spotify> esi Spotify adịchaghị na-akparaghị ókè